Graeme Souness Oo Aaminsan In Bandhiga Uu Eden Hazard Ka Sameeyo Kulamada Uu Barcelona Ka Hor Iman Doonaa Ay Xiisaha Real Madrid Go’aamin Karto | Saxil News Network
Graeme Souness Oo Aaminsan In Bandhiga Uu Eden Hazard Ka Sameeyo Kulamada Uu Barcelona Ka Hor Iman Doonaa Ay Xiisaha Real Madrid Go’aamin Karto
Kooxda ka dhisan gobolka Catalonia ee Barcelona ayaa la filayaa inay kaalin muhiim ah ka qaadato ku biirirsta kubad sameeyaha kooxda Chelsea ee Eden Hazard safka kooxda ay cadaawada kala dhexeyso ee Real Madrid, kadib marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
Kooxaha Barcelona iyo Chelsea ayaa ku balansan xili ciyaareedkan inay kugaalamaan kulamada wareega 16-ka ee tartanka UEFA Champions League-ga, balse sida uu aaminsan yahay halyeyga kooxda Liverpool ee Graeme Souness hadii uu xidiga reer Belgian uu bandhig wanaagsan ku hor sameeyo kooxda reer Catalonia ay ka caawin doonto u dhaqaaqistiisa garoonka Santiago Bernabéu.
Khabiirka Graeme Souness oo ka hadlaya in qaab ciyaareedka Eden hazard ee kulalamada Barcelona uu saamayn ku yeelan karo mustaqbalkiisa Blues ayaa yidhi : “Qaab ciyaareedka uu kala hor imaan doono Eden Hazard kulanka Barcelona, waa waxa go’aamin kara suurtagalnimada uu ugu dhaqaaqi karo kooxda Real Madrid”.
Graeme Souness ayaa wuxuu hadalkiisa intaas kusii daray: “Hazard wuu ka warqabaa in Real Madrid ay daawan doonto kulanka uu la ciyaari doono Barcelona, maadaama ay doonayaan in ay lasoo saxiixdaan laacib dhan kasta dhaawac ugu geysan kara Barcelona, sababa kulanka El Clásico-a ay labada kooxood xili ciyaareed kasta isku arkaan, maadaama uu yahay kulan go’aamiya inta badan kooxda ku guuleysaneysa horyaalka La Liga ee dalka Spain”.
Real Madrid ayaa barilmaameedka kowaad ka dhiganysa Eden Hazard iyada oo dhamaadka xili ciyaareedkan uu Florentino Perez diyaar la yahay lacag badan oo uu suuqa gali galin doono isla markaana uu isbadal xoogan ka samayn doono ciyaartoyda uu hadda Zidane ku haysto Bernabeu.